News - Codsiga elektiroonigga iyo qalabka elektarooniga ah ee muraayadaha indha-sarcaadka ee cctv dheer
Codsiga elektiroonigga iyo qalabka elektarooniga ah ee muraayadaha indha-sarcaadka ee cctv dheer
Waxaa jira laba nooc oo farsamada defog ah.
Guud ahaan, 770 ~ 390nm iftiin muuqda kama gudbi karo ceeryaanta, si kastaba ha noqotee, Infrared wuxuu mari karaa ceeryaanta, maxaa yeelay infrared wuxuu leeyahay dherer dherer ka dheer iftiinka muuqda, oo leh saameyn muuqata oo kala-soocid ah. Mabda'aani waxaa lagu dabaqayaa defog optic ah, wuxuuna ku saleysan yahay muraayadaha gaarka ah iyo miiraha, sidaa darteed dareemahu wuxuu dareemi karaa meel u dhow infrared (780 ~ 1000nm), wuxuuna hagaajinayaa muuqaalka muuqaalka ee isha asalka.
Laakiin sababta oo ah infrared waa iftiin aan la arki karin, way ka baxsan tahay baaxadda mashiinka wax lagu sawirayo, markaa sawir madow iyo caddaan ah ayaa la heli karaa.
Defog elektaroonig ah waa adeegsiga algorithms ka shaqeynta muuqaalka si kor loogu qaado sawirka. Waxaa jira hirgelin badan oo elektiroonig ah-defog.
Tusaale ahaan, algorithms-ka aan qaab-dhismeedka ahayn ayaa loo adeegsadaa in lagu wanaajiyo is-barbardhiga muuqaalka, taas oo kor loogu qaadayo aragtida muuqaalka ah Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira qaab soo celin muuqaal ah oo ku saleysan qaab, kaas oo daraaseeya sababaha tusaalaha iftiinka iyo hoos u dhaca muuqaalka, tusaalooyinka hannaanka nabaad-guurka, iyo adeegsiga farsamaynta qalloocan si ugu dambeyn loo soo celiyo sawirka. Saamaynta elektiroonig-defog waa mid muhiim ah, maxaa yeelay xaalado badan sababta foosha xun ee muuqaalku waxay la xiriirtaa xallinta muraayada lafteeda iyo algorithm-ka farsameynta sawirka marka lagu daro ceeryaanta.
Horumarinta tiknoolajiyada defog
Horaantii 2012, moduleka kamarad-dhajinta SC120 ee ay soo saartay Hitachi wuxuu leeyahay shaqada defog. Dhawaan, Sony, Dahua, Hivision, iwm. Sidoo kale waxay bilaabeen badeecooyin isku mid ah oo elektaroonig-defog ah. Ka dib dhowr sano oo horumar ah, tiknoolajiyada elektaroonigga ah-defog ayaa si tartiib tartiib ah u bislaatay. Sannadihii ugu dambeeyay, soo saarayaasha Lens waxay si qoto dheer ula shaqeynayaan soo saarayaasha kamaradaha, waxayna si isdaba joog ah u bilaabeen noocyo kala duwan oo ah alaabada indhaha-defog.
Xalka by View Sheen
Viewsheen waxay soo saartay taxane ah module kaamirada zoom oo ku qalabaysan heer sare super defog (optical + electronic). Si loo helo waxqabadka ugu wanaagsan ee defog. Habka indhaha + elektiroonigga ah waxaa loo isticmaalaa in lagu wanaajiyo isha isha illaa howsha dhamaadka-dhamaadka. Isha isha waa inay u oggolaataa inta ugu badan ee infrared infrared inta suurtagalka ah inay dhex marto, sidaa darteed muraayada aperture weyn, dareemayaal weyn iyo shaandheeye saameyn wanaagsan oo ka-hortagga milicsiga waa in loo tixgeliyaa si dhammaystiran. Algorithm waa inuu ku saleysnaadaa arrimo ay ka mid yihiin masaafada shayga iyo xoogga ceeryaanta, oo xulo heerka defog, yareeyo buuqa ka dhasha farsamaynta sawirka.